रोनाल्डोलाई भित्र्याउन चाहन्छ बार्सिलोना, के बार्सिलोना जाने तयारीमा छन् क्रिस्टियानो रोनाल्डो ? - नेपाल घटना
प्रकाशित : २९ श्रावण २०७७, बिहीबार १६:३९
स्पेनका फुटबल पत्रकार गुइलेम बालागेले बार्सिलोनाले क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई भित्र्याउन चाहेको बताएका छन्।
पोर्चुगलका फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई बार्सिलोनाले किन्ने प्रयास गरेको भन्ने खबर अहिले फुटबल जगतमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
बार्सिलोनासहित युरोपका ठुला क्लबहरुले मोटो रकमसहित रोनाल्डोलाई भित्र्याउन उनी आबद्ध इटालियन सिरि ए क्बल युभेन्ट्ससँग प्रस्ताव राखेको बालागेको दावी छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुमा रोनाल्डोलाई बार्सिलोनाले किन्ने प्रयास गरेको भनेपछि के पछिल्लो १५ बर्ष देखिका दुई प्रतिद्वन्दी लियोनेल मेसी र रोनाल्डो सँगै खेल्लान त ? भन्ने प्रश्नले फुटबल फ्यानलाई रोमाचित बनाएको छ ।
रोनाल्डोले दुई सिजनअघि ला लिगा क्लब रियल म्याड्रिड छाडेका थिए। युभेन्ट्समा उनले दुवै सिजन घरेलु लिग जितेपनि क्लबको अपेक्षाअनुसारको सफलता हात पार्न सकेका छैनन्।
रोनाल्डोले यस सीजनमा युभेन्टसलाई सेरी ए उपाधि जिताएका छन् ।
तर युभेन्टसलाई च्याम्पियन्स लीगको ट्रफी उचाल्ने इच्छा तीव्र रहेकाले रोनाल्डोलाई सन् २०१८ मा भित्र्याएको थियो । लगातार दुई सीजन रोनाल्डो हुँदा पनि युभेन्टस च्याम्पियन्स लीगमा प्रिक्वार्टरफाइनलबाटै बाहिरिएको छ । यसले गर्दा रोनाल्डो आफैं निराश भएका छन् ।
युरोपियन च्याम्पियन्स लिगका पछिल्ला दुई सिजन युभेन्ट्स क्वार्टरफाइनलभन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन।
फाइभ लाइभ स्पोर्टसँगको कुराकानीमा ५१ वर्षीय बालागेले भनेका छन्, ‘ रोनाल्डोलाई जो कोहीले पनि भित्र्याउन चाहन्छ, बार्सिलोनासहित। तर मलाई थाहा छैन, रोनाल्डोले गर्ने आम्दानीलाई धान्न सक्ने गरि उनलाई भित्र्याउन सक्छन् सक्दैनन् क्लबहरु। त्यत्रो पैसा कसले खर्च गर्न सक्छ।’
खासगरी एक स्पेनिस पत्रकार जुइलेम बलागुएले बिबिसीसँगको कुराकानीमा रोनाल्डोलाई युभेन्टसले बेच्न खोजेको र रोनाल्डोलाई बार्सिलोनासहित विश्वका ठुला क्लबले किन्ने इच्छा देखाएको बताएका थिए । उनले युभेन्टसलाई रोनाल्डोको पारिश्रमिक तिर्न मुश्किल भइरहेको भन्दै रोनाल्डोले युभेन्टसको विकल्प केहि महिना अघि देखि नै खोजिरहेको उनले बताएका छन् । उनले रोनाल्डोको पूर्वक्लब रियल म्याड्रिडले भने रोनाल्डोलाई फेरी नकिन्ने बताएको उल्लेख गरेका छन् ।
बार्सिलोनाका लियोनल मेस्सी र रोनाल्डोले पछिल्लो १२ वर्षयता विश्व क्लब फुटबलमा राज गरिरहेका छन्। साच्ची नै बार्सिलोनामा रोनाल्डो भित्रिए त्यो रोचक बन्ने छ।
फुटबल फ्यान र खेलाडीहरु स्वयंले नै विश्वास गर्न नसकेको विषय रोनाल्डो बार्सिलोना जालान् त ? भन्ने प्रश्न अहिले निकै चर्चित भएको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बार्सिलोना आर्थिक संकटमा रहेको बताइन्छ। ला लिगामा यो सिजन उपविजेतामा सिमित भएपछि बार्सिलोनालाई च्याम्पियन रियल म्याड्रिडसँगको दुरी कम गर्ने दबाब छ।
युभेन्टस च्याम्पियन्स लिगको असफलतापछि म्यानेजरलाई बर्खास्त गरेर नयाँ म्यानेजर आन्द्रे पिरलोलाई भित्र्याएको छ । अब युभेन्टसले पाउलो डिबाला, एरोन रामसी जस्ता खेलाडीका लागि राम्रो अफर हेरिरहेको मिडिया रिपोर्टमा बताइएको छ । च्याम्पियन्स लिग जित्ने लक्ष्यका साथ रोनाल्डोलाई भित्राएको युभेन्टसले अब त्यो लक्ष्य दुई सिजनमा पनि पुरा नभएपछि रोनाल्डोको विकल्प खोज्न सक्ने फुटबल विश्लेषकहरुले अनुमान गर्न थालेका छन् ।
फूटबलविज्ञ बालागका अनुसार, रोनाल्डाका एजेन्ट होर्खे मेन्डेसलाई नयाँ क्लब खोज्न निर्देशन दिइएको छ । त्यसक्रममा उनले बार्सिलोनालाई पनि भेटेका छन् ।
रोनाल्डोलाई बार्सिलोनाले भित्र्याएमा लियोनल मेस्सीसँग खेल्नेछन् । लामो समयसम्म एकअर्काविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरेका यी दुई खेलाडीले करीयरमा पहिलोपटक सँगै खेल्ने परिस्थिति निर्माण हुँदा प्रशंसकहरू खुशी हुने पक्का छ ।
‘क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई पीएसजीसँग जोड्नु भनेको पीएसजीले उनलाई किन्न खोजेको भन्ने हैन । होर्खे मेन्डेसलाई रोनाल्डोका लागि नयाँ क्लब खोज्नू भनी निर्देशन आएकाले खबरहरू आएका हुन्,’ बालागले बीबीसी रेडियो ५ लाइभमा बताए ।
‘विगत ६ महिनादेखि उनलाई रियाल मड्रिडसँग जोडिएको थियो । उनीहरूले चाहिँ स्पष्ट रूपमा रोनाल्डोलाई फिर्ता लिँदैनौँ भने । रोनाल्डोलाई महंगो पारिश्रमिक तिर्नुपरेकाले युभेन्टस उनलाई छिटो बेच्न चाहन्छ । त्यसैले अमेरिकाको एमएलएस टीमसँग पनि कुरा चलिरहेको छ ।’
‘परिस्थिति यति गम्भीर बनिसकेको छ कि उनलाई बार्सिलोनामा समेत अफर गरिएको छ । तर उनलाई महंगो पैसा तिरेर किन्न जुनसुकै क्लब पनि हिच्किचाउँछ ।’
त्यस्तै अर्को पक्ष बार्सिलोना सामान्य हिसाबमा रोनाल्डोलाई भित्र्याउन इच्छुक नहुनु पर्ने देखिन्छ । तर क्लबको लगातार लिगमा औसत प्रदर्शन र मेसीप्रति भर परेको टिमका कारण अन्य विकल्पमा चर्चा नहुने भन्ने हुदैन । तर रोनाल्डोलाई बार्सिलोनाले भित्र्याउन इच्छा देखाएको विषय आफैमा कुनै पत्रकारले भनेपनि आधिकारिक रुपमा क्लब र खेलाडीले नभनेसम्म पत्याइहाल्न भने मुश्किल नै देखिन्छ ।
Guillem Balague on Cristiano Ronaldo's future
? 'Juventus want to get rid of Ronaldo's wage, he's been offered everywhere including Barcelona'
Posted by BBC Radio5live Sport on Wednesday, August 12, 2020
मेस्सीको पिसिआर रिर्पोट नेगेटिभ, बार्सिलोनासँग प्रशिक्षणमा फर्किए
मेस्सीका लागि म्यानचेस्टर सहि गन्तव्य !, अनुबन्ध गर्न सिटी जति तिर्न पनि तयार